Refinancing kusukela credit ezikhanyisayo ukuba loans ikhadi kungaba? Nginikeze ke?
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Refinancing kusukela credit ezikhanyisayo ukuba loans ikhadi kungaba? Nginikeze ke?
Ngisho e sokukhokhwa ezikhanyisayo credit phakathi, uma uthola uya khona refinancing weemali, ungakwazi refinance loans ikhadi. Nokho, kunokuba Ukulondoloza isikhashana Uhlaka, uma uke wathola loan uzimele yezitolo, ngoba kungenzeka kube khona bakwazi refinance, ake sihlole kusengaphambili.
Ngaphezu kwalokho, ngaphandle jikelele loans ikhadi, kwezezimali ukuthi ziye zachazwa ngokuthi "ukuqiniswa kwesikweletu" Uphinde abhekwe njengoba ukukhetha oyinhloko refinancing uya khona. Ukuhlanganiswa izikweletu, uma sewenze buyiselo ezikhungweni zezimali amaningi, libhekisela loan, njengalezo wafingqa uya khona ukubuyiswa kwemali eyodwa. Ngoba wena futhi loans ikhadi ukuthi sabusiswa ubunjalo sokuhlanganiswa izikweletu ezikhona, labo abase bethole ngezimali ezikhungweni zezimali amaningi, ake sibheke sokubolekwayo ezinjalo.
refinance uma kukhona izinhlanga iyafaneleka? Lapho refinance
ezikhanyisayo credit on loan ikhadi, kukhona kungenzeka ukuthi akhipha inani ukubuyiswa kwemali imali. Ngokwesibonelo, kusukela ngo-loans yasebhange-ikhadi babe ongaphakeme zenzalo uma iqhathaniswa ezifana ezezimali umthengi, kuyokusiza ukuba ugcine ingxenye isithakazelo. Ngaphezu kwalokho, ezinye izikhungo zezimali kuzoholela futhi ukusindisa ikhomishana.
Nokho, ngoba indlela ukubuyiswa kwemali kakhulu noma inani lemali zizoshintsha, incike refinancing uya khona weemali. Ngenxa yalesi sizathu, ngokuqondile belingisa ushintsho lemali ukubuyiswa kwemali imali, ake ngokucophelela ukukhetha uya khona refinancing weemali.
futhi ukuthi "ukubuyiswa kwemali kungaba hlanganisa", ungasho yini ukuthi izinzuzo refinancing. Futhi ithole ngezimali ezikhungweni zezimali amaningi, njengoba amaningi nyangazonke of the sebhithi ukufinyelela ekhaya, ngeke kube nzima ukuwaqonda isimo ukusetshenziswa kanye ukubuyiswa kwemali isimo. Ngakho-ke, usebenzisa ukuhlanganisa izikweletu, uma kungenzeka ukuhlanganisa senkokhelo, kuyoba lula ukwenza ngaphezulu uhlelo ukukhokha imbuyiselo.
[su_note note_color = "# ffffff"] _ x000D_ ezikhanyisayo credit. I loan ikhadi yindawo
ezikhanyisayo wesikweletu page net phezulu sibethula inombolo enkulu. Kuyinto ezimweni eziningi ngeke ukwazi refinance, kodwa kuwufanele ngizame ukuba ubuze sikhathi.
[/ su_note] Kufanele kuqashelwe uma
refinance kuyinto? Ngu
refinancing uya khona weemali, amasevisi ezahlukene ukuthi kunezelwa loan. Ngokwesibonelo, ezinsizakalweni ezifana wokwehla isibonelelo kanye nezinga lenzalo iphuzu kuyabonakala, kodwa okuqukethwe izinzuzo yisevisi obukhulu abantu ngeke ifane. Ngakho-ke, ngokuqinile ukuqonda okuqukethwe inkonzo yaleyo naleyo nhlangano yezimali ukuze uqiniseke ukuthi ukhethe izinzuzo likhulu refinancing uya khona mina.
ngesikhathi, kuyabonakala kwinsizakalo yokubolekwa ezifana abasebenzi weemali nathi ngezeluleko ecebeni buyiselo yengeziwe. Uma uzizwa nokukhathazeka esikhathini esizayo buyiselo, ukubolekisa enjalo futhi sicabangele njengoba nesinye sezinqumo.
Futhi, isifinyezo sakho, refinancing loan kuphela, kuphela awukwazi ukuboleka ngokuvamile inani lemali esele ofuna ukukhokha. Uma kungenzeka ukuthola imali-mboleko entsha, kubalulekile ukukhetha sokubolekwa imali nge ezengeziwe. Futhi kubonakala kwinsizakalo yokubolekwa, ezifana zengezwe. Uma uzizwa nokukhathazeka esikhathini esizayo buyiselo, ukubolekisa enjalo futhi sicabangele njengoba nesinye sezinqumo.
Futhi, isifinyezo sakho, refinancing loan kuphela, kuphela awukwazi ukuboleka ngokuvamile inani lemali esele ofuna ukukhokha. Uma kungenzeka ukuthola imali-mboleko entsha, kubalulekile ukukhetha sokubolekwa imali nge ezengeziwe.